DF oo Ciidan diyaarado ku geysay Beledweyne | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo Ciidan diyaarado ku geysay Beledweyne
Farmaajo ayaa Ciidanka Haram'cad iyo NISA u adeegsado danihiisa siyaasadeed, isagoo ku weerara Mucaaradka iyo Madaxda Maamul Goboleedyada kasoo horjeeda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Boqolaal Askari oo katirsan Ciidamada Haram'cad ee uu Turkiga tababarey ayaa diyaarado lagu geeyay 24-kii saac ee ugu dambeeyay magaaladda Beledweyne, ee xarunta gobolka Hiiraan.
Ciidamada oo laga diray Muqdisho ayaa la geeyay saldhigyo Beledweyne ku yaalla, oo la sheegay in mudooyinkii dambe lagu diyaarinayay duulaan ka dhan ah Jen Xuud, oo kasoo horjeeda Maamulka Hirshabeelle ee dhawaan lagu dhisay Jowhar.
Wasiirka Arrimaha Gudaha DF Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa Beledweyne ku sugnaa mudooyinkii dambe, oo u tagey dejinta Xiisadda ka taagan gobolka Hiiraan oo u dhaxaysa Jen Xuud iyo Hirshabeelle.
Waxaa muuqata inay soo xirmeen albaabaddii wadahadalka, oo ay DF qorsheynayso inay weerar ku qaado saldhigyada Malleeshiyaadka Jen Xuud ee duleedka Beledweyne, sida ay illo ku sugan gobolka u sheegeen KON.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Ciidanka Haram'cad iyo NISA u adeegsado danihiisa siyaasadeed, isagoo ku weerara Mucaaradka, kuna afduuba doorashooyinka ka dhaca Maamul Goboleedyada kasoo horjeeda.